ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: (((((((... ဗွမ်း ...)))))))
မြေနီလမ်းကလေးအတိုင်း အပြေးတစ်ပိုင်း ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လာခဲ့တဲ့ ကျနော့်ခြေလှမ်းတွေက တုန်ချည့်နေပါပြီ..။ လွင့်ပျံ့တက်လာတဲ့ ပုပ်အက်အက် အနံ့တွေက ကျနော့်ကို တကယ်ပဲ အော်ဂလီဆန်သွားစေပါတယ်..။ တံခါးကို ဂျိမ်း ကနဲ ဆောင့်ပိတ်ရင်း အသက်ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် အောင့်ထားလိုက်တယ်..။ အခန်းလေးက ကျနော့် တစ်ကိုယ်စာ ဆန့်ရုံလေးပါ..။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ထိုင်ချလိုက်တယ်..။
အခန်းတံခါးကိုဖွင့် ပြေးထွက်သွားရင် ကောင်းမလား..! ဒီလိုတော့လည်း ကျနော် မထွက်ရဲ.. ကျနော့်ရဲ့ အရှက်.. အရှက်တရားတွေ..။ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့လည်း မ၀ံ့ရဲ.. ခုန်ချလိုက်လိုက်ဖို့ ဆိုတာမတွေးရဲစရာ.. ကျနော် မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလား..! သူ့မျက်လုံးကို ရဲရဲ ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရော..! ဖြစ်ပါ့မလား..! ကျနော်ထိတ်လန့်နေတယ်.. သူဘာလို့ ဒီအခန်းထဲ ရောက်နေတာလဲ..! ကျနော်.. ကျနော်လေ..!
ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကလည်း အကြီးအကျယ် ဖိအားပေးနေပါတယ်.. ကြက်သီးတွေလည်း ကျောထဲက စိမ့်ပြီး ထလာပါတယ်.. ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်.. အာခေါင်တွေလည်း ခြောက်ကပ်လာတယ်.. အသက်ရှူရတာ မ၀တော့ သလိုလို.. ခေါင်းတွေမူးလာသလိုလို..။ ကြောက်စိတ်နဲ့ ဝေဒနာကြားမှာ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခက သေလုမြောပါး..။
အိမ် သာ ထဲ က မြေ ကြွက် ကြီး က တော့.....။
ဖွင့်ဟချက်။ ။ ဟိုး.. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကလေးအရွယ်.. ရွာကျောင်းက တွင်းအိမ်သာထဲမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြေကြွက်ကြီးနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ.. မြေကြွက်ကြီးက အိမ်သာ ထုတ်တန်းပေါ့ကနေ ဆင်းလာတယ်.. ကျနော့်ရဲ့.. ဗွမ်း..))) ကနဲ ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲသံကို ကြားတော့.. ထွက်ပြေးသွားတယ်.. ဒါပါပဲ.. အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ဒုက္ခပေါ့.. အခုပြန်တွေးကြည့်တော့လည်း ရယ်စရာ ညစ်တီးညစ်ပတ် ဟာသလေးပါ.. ဟီးး
ညီလေးဂျဲဂျယ် ရေ.. ညီ Tag ထားတဲ့ တက်(ဂ်) ကြွေးလေးကို ဗွမ်း.. ကနဲ စပ်လိုက်ပါတယ်နော်.. ဟီးးး :D
အချိန် 8:46 PM
ဟဲ.. တစ်ဖြစ်ချင်လို့ လော့ဂ်အင်တောင်မဝင်တော့ပဲ
မန့်လိုက်သည်...။ ကျောင်းအိမ်သာက ရေတံလျှောက်မရှိဘူးထင်တယ်....။ဒါ့ပြင် မိုးတွင်း ရေလျှံနေချိန်များလား...။ (လျှံတာက တွင်းကိုပြောတာပါ..)
ဗွမ်း သံတန်းထွက်လာလို့....။ ဟီးးးးးးးးးးး
sin dan lar ရေ..
(((((((... ဗွမ်း ...))))))) ဆိုတာ.. မြည်သံဆွဲသွားတာပါ.. ရေထဲကျတဲ့ အသံမဟုတ်.... အလွန်အင်မတန် ပေါက်ကွဲအား ပြင်းထန်သွားတာပါ... ဟီးးးး
ဟီး...ဇတ်လမ်းလေးကကောင်းခန်းရောက် မှ အီအီပါမှန်းသိတော့တယ်........
အိ... ဒါဆိုထင်တာထက်ပို ဆိုးနေပါ့ရော......
ခွိခွိ... တောက်တီးတောက်တဲ့တွေ ရင်ခုန်အောင်ရေးတတ်တဲ့ သားငယ်ရဲ့ ဦးနော်ပါလား....
((((((((((... ဗွမ်း ...)))))))))))
((((((((((... ဗွမ်း ...))))))))))) ဦးနော် ညစ်ပတ်ကြီး ပြန်အထကော သေချာ ဆေးခဲ့ရဲ့လား ဟီးးးးးးး အညာကဆို မှတ်မိသေးတယ် ယင်လုံအိမ်သာမဟုတ်ဘူးလေ ၀ှီးးးးးးးးးးး ခနဲ အောက်ပြုတ်ကျတာ အဟားးးးးးး ဟုတ်လား ဒါဆို ဗွမ်းးးးးးးးးး ကနဲ နေမှာနော့် ဦးနော် အောက် ငုတ်မကြည့်နေနဲ့ ဗွမ်းးးးးးး
အဟိ ဖစ်မှ ဖစ်ရလေ ကိုရင်နော်ရယ် ဟား ဟား
ဟဲ့.. သေနာ.. နင်ဟာလေ လုပ်လိုက်ရင်...
“ဘူ..” တို့ “ဘွတ်..” တို့ ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်.. ဘယ့်နယ်.. “ဗွမ်းးး” လို့ မြည်ရတာတုန်း.. လွန်လွန်းတယ်.. နင်တော်တော်ညစ်ပတ်းD
ပေါက်ကွဲသံစဉ်က ((((..ဗွမ်း..))) လို့ကို မြည်တာ..
မယုံရင် မြေကြွက်ကြီးကို မေးကြည့်...
အိဟီးးး ခွီးခွီးးးးးးး ဟီးးးးးးးးး
အမှန်ပြောရရင် ကိုရင်တော့ သင်္ကြန်အကြောင်းရေးပြီထင်တယ် ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်တာ။ အခန်းကျဉ်းလေး ထိုင်ချလိုက်တယ်ဆိုမှ နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်။ နောက်တော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် တူနေပပဲ။း)
ဘုရား ဘုရား..အဲဒီတက်ဂ် ကိုဘယ်လိုမှ
ဦးနော်ပြောတာ မှန်မမှန် မေးရအောင် အခုချိန်က စပြီး နယ်တကာ လှည့် မြေကြွက်ရှာပုံတော် ဖွင့်ထွက်တော့မယ် ... ဗျို့.. ဟီး..ဟီး..
ဦးနော်ကလည်း ညစ်ပတ်တယ်... မက်မက်က အစကဖတ်တော့ ဗွမ်းဆိုတော့ ရေကူးကန်ထဲများ ကျသွားသလားလို့...ဟွင့်..သူက အိမ်သာ တတ်နေတာကိုး...
ဦးနော်လည်း လန်ထွက်နေတာပဲ.... အရေးအသားက ဂွတ်တယ်... အရက်တစ်လုံး ထားခဲ့မယ်... ပုလင်းခွံနော်.. ဟတ်ဟတ်
အကိုဆောင်းယွန်းဆီမှာ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့လို့ သင်္ကြန်အကြောင်းတွေတောင်ရေးနေပြီပဲဆိုပြီးရောက်လာ ပါတယ်... နောက်တော့မှ... ပြုံးတောင်မပြုံးနိုင်ပဲ ဝါးစည်းပြေအောင်ကိုရယ်မိတယ်...။ ကျေးဇူးပဲ..ရယ်ရတဲ့အတွက်..။
ပါးစပ်ကလေး တဟဟ နဲ့ 
အသက်ရှုရပ်ပီး.. ပါးစပ်ပိတ်ဖို့ သတိရတယ်...
ကြွက်က ထွက်ပြေးသွားလို့ 
တည့်တည့်ဝင်လာလို့ က ဗွမ်း နောက်က
နောက်ထပ်ငယ်သံပါတဲ့ မြည်သံစွဲ လေး
မြေကြွက်ကြီး ပြေးမယ်ဆိုလဲ ပြေးလောက်ပါတယ်..။ လေးမတောင် ဖတ်ပြီး ပြေးချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်... ပြေးပြီဟေ့...။ ခင်လေးရဲ့ နှင်းဆီမှာတောင် မမန့် နိုင်တော့ဘူး...။ ပြေးပြီ..။
အပါးပါး စိတ်ဝင်စားပြီး မနားပဲ အသက်မရှူပဲဖတ်လာလိုက်တာ အိမ်သာထဲက မြွေကြွက်ကြီးတဲ့ အမငီး ကြောက်တယ် ပြီးတော့ အဲ့အချိန် ကိုရင့်ပုံကိုမြင်ယောင်မိတယ် ဟဟား ရေမဆေးပဲထွက်ပြေးခဲ့လားမသိ မှန်မှန်ပြော အနံ့တွေရနေမယ် ဟီးး စတာ စိတ်မဆိုးကြေး နောက်တစ်ခါဆို အဖော်လေး ခေါ်သွားနော့်း)
ဟီးဟီး .. ရီသွားပါတယ်ဗျို့ ....... ပီပြင်ပါပေ့ :D
ဟာဟ.. ခုမှ ရောက်လို့ဗျို့... ဖတ်လိုက်တော့မှ တကယ်ပဲ..
တော်တော်တင်းနေပုံရတယ်.. သူလေးတောင် လှည့်မကြည့်ပဲ ထွက်ပြေးသွားပုံထောက်ရင်..။ဟာဟ
ဦးနော်ကတာ့ ဖြစ်ရတယ် ဗွမ်းတဲ့
ဦးနော် ညတ်ပစ်... တော်သေးလို့ ကြွက်က အပေါ်ထုပ်တန်းကဆိုလို့။ အောက်ကနေ ထွက်လာရင်တော့ .. ဟီးဟီး